Kwa Maritane Bush Lodge - I-Pilanesberg National Park
Ngenxa yendawo enhle futhi isevisi enhle kakhulu, KwaMaritane manje kuyinkokhelo yokuwina i-Sun City safari lodge.
I-lodge inezindawo zenkomfa ezitholakalayo
Isenzo nokuzijabulisa kwe-Sun City eduzane
Wonke amakamelo ane-air conditioning ngayinye
Jabulela izilwane zasendle nezilwane ezinwabuzelayo ePilanesberg
Ukwakhiwa kwe-KwaMaritane kwaqala amakhulu eminyaka edlule - intaba-mlilo yasolwandle yamandulo yakha amagquma ukuthi i-KwaMaritane imile namhlanje. Igama eliyingqayizivele lokuhlala kwakho eduze kweSun City lisho 'Indawo yedwala'. Kusuka lapha, ungabheka phezu kwamathafa angenamkhawulo eduze kwePilanesberg National Park - indawo ecebile emasimini asendle futhi ephethe izinyoni ezingu-365.
Indawo yokuhlala kule Pilanesberg National Park ihlala kwelinye lamakamelo okunethezeka angu-90 noma ama-unit timeshare angu-54. Zonke amakamelo afaka izinsiza zanamuhla ezifaka umoya-moya, izindlu zangasese, ilineni ekhanda, indlu yokugezela kanye nezindlu zangasese ukubiza ezimbalwa.
Le ndawo yokuhlala ehlathini isendaweni eyinhloko futhi ikunika ukufinyelela ePilanesberg National Park naseSun City, okwenza kube indawo yokuzijabulisa nokuzijabulisa okungenakulibaleka komndeni. Khetha emisebenzini eminingi yokuzilibazisa, yezemidlalo kanye ne-adrenaline enikezwa esifundeni.
Jabulela ukudla kwasekuseni okumnandi, ukudla kwasemini noma isidlo sakusihlwa e-Kwa Lafekeng Restaurant okubheke ekufomeni kwamanzi okugcoba nokuphefumula. Hlala isidlo sokungena emlonyeni kule ndawo yokudlela yasePilanesberg ngaseSun City, futhi uhlanganyele ekudleni okudakayo okuhlanganisa i-Springbok, Carpaccio, Chicken kanye ne-Coriander Salad kanye ne-Seafood Hors D'oeuvres. I-Maritane iphinde ibe ne-spa lapho ungajabulela ukukhethwa kwezikhungo ezikhethekile ze-spa.